India inokwidziridza huwandu hwendege kuenda ku85% yematanho epamberi-COVID
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » India Kupwanya Nhau » India inokwidziridza huwandu hwendege kuenda ku85% yematanho epamberi-COVID
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • India Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
India inokwidza yayo nendege inokwana 85% emazinga pre-COVID
Shanduko dzakaziviswa nebazi rezvematongerwe enyika dzichabvumidza vatakuri vemhepo veIndia kuti vashande nendege zhinji uye vachakwidza mitoro yevatakuri nekutanga kwemwaka wezororo wenyika mwedzi unouya.
Hurumende yeIndia inodzoreredza COVID-nguva zvirambidzo kune vanotakura mweya venyika.
Ndege dzeIndia dzave kuzobvumidzwa kushanda pa85 muzana yeavo pre-denda kugona.
Ndege dzeIndia dzekumba dzinozobvumidzwawo kumisikidza yavo mitengo yetikiti kupfuura mazuva gumi nemashanu kubva pazuva rekubhuka.
India Ministry of Civil Aviation yakasimudza cap pamusoro pemhepo inotakura mweya nhasi, ichigonesa maIndia ndege kushanda pa 85% yeavo pre-COVID-19 chinzvimbo panzvimbo yazvino 72.5%.
Indian civil aviation Authority yakachinjawo mutengo cap cap, ichibvumidza ndege dzendege kumisikidza yavo mitengo yetikiti kupfuura mazuva gumi nemashanu ezuva rekubhuka.
Kusvikira kugadziriswa kwanhasi, makapeti emitengo aishandiswa kumatikiti anosvika mazuva makumi matatu kubva pazuva rekubhuka.
Shanduko dzakaziviswa ne Ministry of Civil Aviation inobvumidza vatakuri vemhepo veIndia kuti vashande dzimwe nendege uye vachakwidza mitoro yevatakuri nekutanga kwemwaka wenyika wezororo mwedzi unouya.
India yekumusha mweya traffic yakawedzera 34% kusvika 6.7 mamirioni muna Nyamavhuvhu pane akateedzana hwaro kumashure kwekuwedzera kwesimba kusvika 72.5%.
Kuwedzera wekudzivirira uye wakasununguka COVID-19 yekuedzwa zvinodiwa zvakabatsira zvakare. Maindasitiri-akazara zvigaro zvekugara zvakare zvakakwira kusvika pamusoro pe70% mwedzi wapfuura.
Kurerukirwa kwesimba rekufamba nendege uye kurerutswa kwemitengo yemitero kunouya mushure mekufamba kwakawanda kwekutaurirana pakati peIndia Civil Aviation Ministry nevakuru vemahofisi eIndia.
Kuenda kunotora cap uye fares kwakakamura zvakanyanya indasitiri naRonojoy Dutta, CEO wekambani huru yeIndia indigo, Kushevedza kubvisa kukanganiswa kwehurumende pamusoro pemutengo nekugona, ichiti izvi zvinodzivirira ndege kubva mukuita zvisarudzo zvine chekuita nekutengeserana.
Vashandisi venhandare huru dzenyika - Delhi, Mumbai, Bangalore - vakurudzira hurumende kuti ipedze zvivharo nemutengo sezvo izvi zvichitadzisa kudzoka kwevafambi uye zvichikuvadza zvakanyanya mari dzendege dzanga dzisiri dzevanhu veIndia.